Tilmaame loogu talagalay suuqleyda ku saabsan hantida aqooneed (IP) | Martech Zone
Suuqgeyntu waa hawl joogto ah. Haddii aad tahay shirkad ganacsi ama ganacsi yar, suuqgeyn ayaa ah dariiq muhiim u ah in ganacsiyada la sii wado iyo sidoo kale in laga caawiyo in ganacsiyada loo horseedo guul. Markaa waa muhiim in la ilaaliyo lana ilaaliyo sumcadda sumaddaada si loo sameeyo meel siman ololaha suuqgeynta ganacsigaaga.
Laakiin kahor intaan lala imaan olole suuqgeyn istiraatiiji ah, suuqleydu waxay u baahan yihiin inay si buuxda u ogaadaan qiimaha iyo sidoo kale xaddidaadda astaantooda. Dadka qaar waxay u muuqdaan inay hoos u dhigaan muhiimada ay leedahay xuquuqda hantida aqooneed ololahooda suuqgeynta. Inagoo sifiican u ogsoon in xuquuqda lahaanshaha aqooneed ay aasaas weyn u noqon karto nooc ama wax soo saar, waxaan ka wada hadalnay qaar ka mid ah faa'iidooyinkiisa iyo sidoo kale faa'iidooyinkiisa.
Hantida aqooneed waa Faa'iidadaada Tartan
Xuquuqda hantida aqooneed sida patentka iyo ilaalinta astaan ​​ganacsi waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay si fudud bulshada ugu soo bandhigaan wax soo saarkooda.
Suuqleyda ayaa horeyba u lahaa hal-shey haddii sheygooda la patentiyo. Maaddaama ilaalinta patent-ka ay siineyso ganacsiyada xuquuqda inay ka saaraan waxyaabaha la midka ah suuqa, waxay si weyn uga dhigeysaa shaqada suuqleyda mid aan dhib badneyn. Waxay si fudud diiradda u saari karaan inay la yimaadaan an istaraatijiyad suuqgeyn wax ku ool ah oo ku saabsan sida loogu soo bandhigo wax soo saarkooda suuqa, oo aan laga walwalin inaad ka badiso ama ka adkaato tartamayaasha.
Ilaalinta astaanta ganacsiga, dhanka kale, waxay taageertaa oo aasaas u siisaa ololaha suuqgeynta. Waxay siisaa ganacsiyada xuquuq gaar ah astaan, magac, hal ku dhig, naqshad, iyo wixii la mid ah. Astaan-ganacsi ayaa ilaaliya sumcadda iyo sawirka astaantaada iyadoo ka ilaalinaysa dadka kale inay ganacsi ahaan uga faa'iidaystaan ​​sumaddaada. Calaamaddu waxay aqoonsi u noqon kartaa macaamiisha inay ku aqoonsadaan badeecadaada suuqa. Markaad haysato ilaalinta astaanta ganacsiga, waxaad hubsan kartaa in iyadoo aan loo eegin ololaha suuqgeynta ama istiraatiijiyadda aad sameyso, dadweynuhu ay helayaan farriin u dhiganta tayada alaabadaada suuqa.
Tusaale ahaan, soo saaraha asalka ah ee batteriga daruuri kama aha mas'uul ka ah baytariyada la moodo ee qarxay. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha ma awoodi karaan inay aqoonsadaan in batteriga lagu daydo maxaa yeelay astaantaada ayaa lagu arki karaa sheyga. Mar haddii macaamilku waayo-aragnimo xun ku yeesho badeecad, waxay markaas saameyn ku yeelan doontaa go'aankooda iibsashada oo waxay u leexan karaan noocyo kale oo beddelaad ah. Markaa waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in patent iyo ilaalinta astaan ​​ganacsi ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah ololaha suuqgeynta guuleysta
Baadhitaan ku samee Hantida aqooneed ee tartamayaashaada
Suuqyayaashu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in ganacsiyada ay tahay inay sameeyaan baaritaanka patent ama astaan ​​ganacsi ka hor inta aan la xareynin codsi patent ama calaamadeyn ah Xafiiska Mareykanka ee Patent and Trademark Office (USPTO). Inta lagu jiro marxaladdan, suuqleydu waxay u baahan yihiin inay lug ku yeeshaan maxaa yeelay natiijooyinka raadinta patentka ama calaamadaha ganacsiga waxay soo saari karaan macluumaad muhiim ah oo loo adeegsan karo dejinta qorshe suuqgeyn wax ku ool ah. Macluumaadka guud ee la heli karo ee ku saabsan hantida aqooneed waa aalad suuqgeyn wax ku ool ah oo loo adeegsado si loo aqoonsado kuwa la tartami kara.
Maaddaama codsiyada patent-ka ay badanaa soo gudbiyaan shirkadaha ganacsiga, waxaad si fudud u raadin kartaa ganacsiyada soo saara alaabooyin la xiriira ama si uun kugula mid ah. Markaad sidaa sameysid, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato awooda iyo xaddidaadda alaabtaada ee suuqa intaadan xitaa bilaabin u ololeynta.
Lahaanshaha fahamka sida loo sameeyo baaritaanka lahaanshaha waxay asal ahaan waxtar u leedahay suuq-geynta ganacsiga sidoo kale. Waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato ganacsiyada ama shirkadaha ka faa'iideysan kara wax soo saarkaaga. Tusaale ahaan, haddii aad ku jirto ganacsi soo saaraya mikroskoob elektaroonik ah, waxaad awoodi doontaa inaad raadsato shirkado kale oo xiriir la leh hawshaas.
Natiijooyinka baaritaanka patent-ka xirfadlaha ah oo ay weheliso fikrad sharciyeed oo ka socota Qareenka Patent-ka ayaa si sax ah u ah waxa kasta oo hal-abuure iyo milkiile ganacsi / ganacsade u baahan yahay inuu helo (oo uu si buuxda u fahmo) ka hor inta uusan u dhaqaaqin hal-abuurkooda.
JD Houvener ee Patent-ka Bold
Kahortag Dacwadaha Xadgudubka IP
Waa muhiim in la ogaado qaar ka mid aasaasiga ah ee sharciga hantida aqooneed kahor intaadan u suuqgeyn badeecadaada ujeeddooyin ganacsi. Markaad sidaas sameyso, waxaad awoodi doontaa inaad ka fogaato dib u dhacyada ganacsiga iyo dacwadaha qaaliga ah ee la xiriira ku xadgudubka.
Marka la eego xuquuqda lahaanshaha, suuqleyda badankood waxay horey u yaqaaneen xadhkaha iyo baaxadda sharciga xuquuqda daabacaadda markay tahay agabka suuqgeynta. Adeegsiga sawirada, fiidiyowyada, qoob-ka-ciyaarka, muusikada, iwm ee aad kaliya Google ama ka raadinaysid mashiinka raadinta kale waxay qatar gelin karaan ganacsigaaga. Sidaa darteed, waa inaad hubisaa in shaqooyinka hal-abuurka ah ee aad u isticmaaleyso alaabadaada suuqgeynta ay ka xor yihiin xuquuqda daabacaadda ama abuuraha / qoraaga shaqada uu kuu oggolaanayo inaad u adeegsato ujeeddooyin ganacsi. Sidan, waad iska ilaalin kartaa dacwadaha xadgudubka iyo khidmadaha qaaliga ah ee dacwadda.
Sida patent ama astaan ​​ganacsi, ogaanshaha guudmarka geedi socodka asal ahaan wuxuu ka caawin karaa suuqleyda inay ka fogaadaan dacwadaha xadgudubka. Maaddaama hawsha dalabka iyo dayactirka ay xoogaa adag noqon karto, milkiileyaasha ganacsiyada badanaa waxay kireystaan ​​astaan ​​ganacsi ama qareenka patentka si ay uga caawiyaan wadajirka. Qoraalkaas, suuqleyda sida adiga oo kale ah waxay u baahan yihiin inay ku lug lahaadaan oo ay maanka ku hayaan howshan si aad ula timaado istiraatiijiyad suuqgeyn wanaagsan oo aan ganacsigaaga qatar gelin doonin.
Dalbo La-talin Bilaash ah oo IP ah
Tags: geesinimo leh ipcopyrightKu xadgudubka xuquuqda daabacaadahantida aqooneedxuquuqda hantida aqooneedsharciga ipJD SaacaddaJD SaacaddasharcigasharciPatentku xadgudubka patentganacsiga
5ta Sababood ee Soo booqde ku yimid Boggaaga